विश्व समाचार - Sitalpati News
इण्डोनेशियामा जीईबीको विश्व उद्यमी सम्मेलन
शीतलपाटी न्युज डटकम । काठमाडौं– युवाहरुको आधुनिक सोचलाई व्यवसायिक मोडेलमा रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले ग्लोबल इन्टरप्रेनरशीप बुटक्याम्पले जकार्तामा तेस्रो चरणको विश्व उद्यमी सम्मेलन गरेको छ। ३५ राष्ट्रका १६० भन्दा बढि युवा सहभागी उक्त सम्मेलनमा व्यवसायका विभिन्न नयाँ मोडेलबारे अन्तरक्रिया भएक...
शीतलपाटीन्युज डटकम। इरान - इरान एक कठोर इस्लामिक कानून भएको देश मानिन्छ । त्यहाँको मुस्लिमहरुको परम्परा एकदमै भिन्न छ । गत वर्ष देशमा यस्ता कतिपय परम्परामा परिवर्तनको कोसिस गरियो । तरपनि रुढीवादी सोँच आज सम्म पनि हटेको छैन । यसको सबैभन्दा ठूलो उदाहरण चाहीँ बिहे अगाडि केटीहरुको कुमारीपनको प्रमाणपत...
लण्डन ।’आउनुहोस्, सबै मिलेर हातेमालो गरौँ , समाजसेवी आइना बार्कालाई सहयोग गरौ । सुस्त मनःस्थिति र मानसिक विकलाङ्ग बालबालिकाका निम्ति सहयोग गरौँ ! उसो त सबै खाले अपाङ्गता या दुर्बलता कष्टकर हुन्छ । त्यसमाथि पनि मानसिक दुर्बलता र सुस्तमनःस्थिति भएका बच्चाको लालनपोषण, शिक्षादीक्षा र आत्मस...
शीतलपाटीन्युज डटकम। अंकरा – टर्कीमा सन् २०१६ मा भएको असफल ‘कू’ पछि लगाइएको संकटकाल बिहीबारबाट हटाइएको छ । राज्य सञ्चालित एनादोलु समाचार एजेन्सीले दुई वर्षदेखि जारी संकटकाल हटाइएको घोषणा गरेको हो। ‘देशको प्रजातान्त्रिक वातावरण वा संवैधानिक अधिकारका न्यूनतम मान्यता तथा द...
मलेसियामा कामदारको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि हुने
शीतलपाटीन्युज डटकम। क्वालालम्पुर — मलेसियाले निजी क्षेत्रमा कार्यरत सम्पुर्ण स्वदेशी र विदेशी कामदारहरुको न्युनतम पारिश्रमिक बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । जसले कामदारहरुको पारिश्रमिक बृद्धिसम्बन्धी नीतिथत प्रस्ताव छिट्टै नै छलफलमाका लागि संसदमा लग्ने भएको छ । मानव संसाधनमन्...
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाडौं - सोसल मिडियाको दुनियाँमा भ्रामक अर्थात झुटो समाचार विश्वभर नै चिन्ताको विषय बनेको छ । फेसबुकलगायत सोसल नेटवर्किङ साईटहरुले यस्ता समाचार फैलाएको आरोप संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकारकर्मीले लगाएका छन् । म्यानमारका रोहिंग्याविरुद्ध घृणा फैलाउनमा फ...
केमान टापुमा नेपालीबाटै ठगिन्छन्
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाडौं - भोजपुरका राजु कार्कीले क्यारिबियन समुद्रमा पर्ने केमान टापुमा साइकल चलाउन थालेको १४ महिना बित्यो । त्यो साइकलमा केमानका गल्लीभित्र छिर्न बाँकी सायदै होला । उनको साइकलको आफ्नै कथा छ । आजको कान्तिपुरको पृष्ठ ३ मा समाचार छापिएको छ । एउटा नेपाली सुरक्षागार्डले आ...
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाडौँ । बेलायतको लर्ड्समा हुने एमसीसी, नेदरल्याण्ड र नेपाल सम्मलित त्रिकोणात्मक श्रृखंलाका साथै नेदरल्यान्ड विरुद्ध हुने एक दिवसिय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्न जाने नेपाली टोलीलाई बुधबार विदाई गरिएको छ। युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले टोलीलाई सफलताको शुभक...
ब्रिटिश गोर्खा: सन् २०२० सम्म महिला पनि भर्ती हुने
शीतलपाटीन्युज डटकम । ब्रिटिश सेनाले गोर्खा ब्रिगेडमा सन् २०२० सम्ममा महिलाहरूलाई पनि भर्ती गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालीहरू दुई सय वर्षभन्दा अघिदेखि ब्रिटिश गोर्खा फौजमा सहभागी हुँदै आएका छन्। यो अवधिमा महिलाहरूलाई पनि लडाकु सैन्यका रूपमा भर्ती गर्न लागिएको यो पहिलो अवसर भएको बताइन्छ। भर्तीका ला...
उद्धार भएका किशोरले भने ‘चमत्कारको क्षण’
शीतलपाटीन्युज डटकम। एजेन्सी - दुई साताभन्दा लामो समय थाम लुङ गुफामा फसेर उद्धार भएपछि अस्पताल बसेर घर फर्किनु भन्दाअघि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गुफामा फसेका किशोरहरु । तस्बिर एजेन्सी बैंकक – बाढीग्रस्त गुफामा दुई साताभन्दा बढी फसेर उद्धार गरिएका १२ किशोरले पहिलो पटक आफ्नो अग्नि परीक...
यी देशका सात शहरहरु बन्दैछन् विश्वकै धनी शहर
शीतलपाटीन्युज डटकम। काठमाडौ । अब न्युर्योक, लण्डन, हङकङलाई विर्सिनुहोस् । यहाँ केही यस्ता सात सहरहरुको सुची रहेको छ जुन निकट भविष्यमै विश्वकै सबैभन्दा धनी सहरहरु हुने अध्ययनकर्ता बताउँछन् । १. दोहा, कत्तार : अनुसन्धानकर्ता म्याककिनसेले भनेका छन्,‘सन् २०२५ सम्ममा यी सहरहरुले ठुलो फट्...
विश्वकपका रोचक ५० तथ्यांक : पेले, क्रायफ, रोनाल्डो जस्ता भेट्रान खेलाडीको कीर्तिमान कस्तो ?
लण्डन । विश्वकप फुटबलको २१ औं संस्करण रुसमा सकिएको छ । रुसले पहिलो पटक आयोजना गरेको विश्वकपको समापन समारोहमा विश्वका शिर्ष नेताहरुदेखि फुटबल हस्तीहरुको उपस्थिति थियो । विश्वकपको सेमी फाईनल खेलमा पराजित भएपनि इङ्गल्याण्डका ह्यारी केनले गोल्डन बुट अवार्ड जितेका छन् । यो विश्वकपमा सर्वाधिक ६ ग...
अमेरिकामा सगुनले ‘सगुन फाउण्डेशन” स्थापना गरेको घोषणा गर्दै १० लाख डलर बराबरको इक्युटी शेयर (स्वामित्व शेयर) छुट्याएको सार्बजनिक
शीतलपाटीन्युज डटकम। अल्डरसट, लण्डन । फाउण्डर गोविन्द गीरी रहेको अमेरिकामा स्थापना भयको सोसल कमर्स साइट सगुन डटकमले गैर आवासीय नेपाली संघ यूकेले बेलायतमा निर्माण गर्ने नेपाल हाउस ड्रीम प्रोजेक्टका लागि लगानी १ लाख डलर बरावरको शेयर स्वामित्व प्रदान गरेको छ। कल्याणकारी कार्यहरु गर्ने उद्धेश...
शीतलपाटीन्युज डटकम। लन्डन- दुई सय वर्षभन्दा बढी समयदेखि ब्रिटिस सेनाको अभिन्न अंग रहेको ‘ब्रिगेड अफ गोर्खाज’ मा पहिलोपटक नेपाली महिलालाई समेत भर्ती गरिने भएको छ । सन् २०२० को वसन्त ऋतुसम्म नेपाली महिलालाई ब्रिटिस सेनामा अवसर प्रदान गर्न लागिएको हो । लडाइँमा प्रत्यक्ष उत्रिन पाउनेग...
कामदारलाई नेपालमै काम दिने वातावरण मिलाउदै मलेसियन सरकारलाई दबाब
शीतलपाटीन्यूज डटकम काठमाडौ । काठमाडौं | नेपाली कामदारलाई यथाशक्य छिटो ल्याउने वातावरण बनाउन रोजगारदाताले मलेसियन सरकारलाई दबाब दिएका छन् । नेपालले जेठ पहिलो सातादेखि नै मलेसियामा कामदार पठाउन रोक लगाएको छ । मलेसियामा सक्रिय रोजगारदाताको संगठनले गृह र मानव संशाधन मन्त्रीलाई भेटी...
सामाजिक कार्यमा सगुन, १० लाख डलर स्वामित्वको फाउण्डेसन स्थापना
शीतलपाटीन्युज डटकम। लन्डन । सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले सोमबार राति अमेरिकामा एक कार्यक्रमका बीच सगुन फाउण्डेशन स्थापना गरेको घोषणा गरेका छन।सोसल मीडीया ईकमर्स प्लेटफर्म सगुनले सामाजिक कामका लागि सगुन फाउण्डेशन मार्फत सहयोग गर्ने योजना बनायकोले यो फाउण्डेसन घोषणा गरेको हो । सगुनका फाउण्डर ग...
वासिङटन डिसी, अमेरिका । सोसल कमर्स प्लेटफर्म सगुनले आफ्नोतर्फबाट गरिने सामाजिक कामका लागि सगुन फाउण्डेशन घोषणा गरेको छ । सगुनका संस्थापक गोविन्द गिरीले सोमबार राति अमेरिकामा एक कार्यक्रमका बीच सगुन फाउण्डेशन स्थापना गरेको घोषणा गरेका हुन् । सगुन फाउण्डशेन स्थापनाबारे जानकारी दिँदै...
४ दिने बेलायत भ्रमणका लागि लण्डन आइपुगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प
लण्डन । अमेरिकी राष्ट्रपतिका रुपमा आफ्नो पहिलो बेलायत भ्रमणका लागि डोनाल्ड ट्रम्प लण्डन आइपुगेका छन् । विहिबार दिउंसो २ बजे पत्नी मेलाइनाका साथ राष्ट्रपति ट्रम्प लण्डन उत्रिएका छन् । ४ दिने बेलायत भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले २ दिन लण्डन र बांकी २ दिन स्कटल्याण्डमा बिताउनेछन् । बेलायतकी प्र...
नेपली साहित्य विकास परिषद यूके द्वारा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०५औँ जन्मजयन्ती मनाइयो
8 जुलाई लण्डन, वेलायत स्थित नेपालीहरूको जेठो साहित्यिक संस्था नेपली साहित्य विकास परिषद यूके द्वारा विविध कार्यक्रम सहित उत्साहवर्धकरूपमा आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०५औँ जन्मजयन्ती मनाइयो । वयस्ट लन्डन, एक्टन स्थित ए बि आइ कलेजमा आयोजित उक्त समारोहलाई संवोधन गर्नुहँदै प्रमुख अतिथि परिषदका पदेन संरक्...
टर्किमा रेल दुर्घटना,१० जनाको निधन,७० जना भन्दा बढि घाईते
शीतलपाटी न्युज डटकम । बीबीसी उत्तर–पश्चिम टर्कीमा आइतबार भएको रेल दुर्घटनामा कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने ७० भन्दा बढी घाइते भएका छन् । टर्कीको सरकारी टेलिभिजन च्यानलले यसको पुष्टि गरेको हो । रिपोर्ट अनुसार बुल्गारियाको सीमामा रहेको कापिकुल शहरबाट उक्त रेल इस्तान्बुल जाँदै...